အားလပ်ရက်မှာ ခရီးတိုထွက်ပါ • POINT
အားလပ်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေတတ်လဲ။လူအများစုကတော့ ရုပ်ရှင်ရုံသွားတာ သင်တန်းတက်တာ စာဖတ်တာတွေနဲ့ချည်း အချိန်ကုန်နေကြတယ်။ အသစ်အဆန်းဖြစ်အောင် စိတ်ခံစားချက်တွေ တဖန်ပြန်ပြီး နုပျိုလန်းဆန်းလာအောင် ခရီးတို မထွက်ချင်ဘူးလား။ ခရီးတိုထွက်ကြရ အောင်လေနော်။
မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးတိုလေးထွက်ရအောင်။ ပျော်ရှွင်စရာအချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဘဝမှာ အမှတ်တရတစ်ခု ချန်ထားခဲ့တာပေါ့။ခရီးထွက်ခြင်းက မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချပေးရုံသာမက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေလည်းနည်းပါးပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ခရီးသွားခြင်းက များစွာအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေရသူတွေအတွက် ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် လမ်းအနည်းငယ်လျှောက်ရာကနေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးနော်။ နှစ်တိုင်းမှာ နေရာများစွာကို ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။တစ်လအတွင်းရှိတဲ့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် မတူညီတဲ့နေရာအသစ်အဆန်း ၁၂ နေရာကို ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် အတွင်းဆို နေရာဘယ်နှခုများရောက်ဖူးသွားလိမ့်မလဲနော်။ ခရီးတိုဆိုတော့ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့။ ခရီးရှည်လို အထုပ်အပိုးများစွာ သယ်သွားစရာမလိုဘူး။ဒါကလည်း ကောင်းကျိုးတစ်ခုပါပဲနော်။ဖုန်းဆက်သွယ်မှုယာယီအဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။တချို့အလုပ်တွေက ပိတ်ရက်မှာလည်းတာဝန်ယူရတာတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကြံဉာဏ်များချမှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်းတို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။စရိတ်ထောင်းတာလည်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ခရီးတိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နေရာထိုင်ခင်းအတွက် အရမ်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။ ရက်တိုဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်ခသက်သာပါတယ်။ တချို့နေရာတွေဆို လမ်းခရီးစရိတ် သက်သာပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လည်း ထသွားထလာလုပ်နိုင်တာကြောင့် လေယာဉ်စရိတ်သက်သာတာပေါ့နော်။အစားအသောက်စရိတ် ရော နှစ်ရက်တာခရီးတွက် ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်မှာမို့လို့လဲနော်။ အဝစားပါစေအုံး။.
ခရီးရှည်ထွက်ခြင်းက အနည်းငယ် ခေါင်းကိုက်စရာရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း၊ မိသားစု တစ်နေရာရာမှာတော့ လစ်ဟာသွားနိုင်ပါတယ်။ ခရီးတိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေ ဝေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ခရီးထွက်ဖို့ကြိုပြင်ဆင်ရတာ နေရာရွေးရတာ ကအစ လွယ်ကူပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆို ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးမြော် ဖူးရမယ်လို့ရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့ စကားတွေကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ ပုပ္ပါးတောင်၊ ကျောက်တော်ကြီး၊ပုဂံ၊ကျိုက်ထီးရိုး၊ အင်းလေး၊ငွေဆောင် တို့လဲ ခရီးတိုထွက်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝအတိုင်းလှပတင့်တယ်တဲ့နေရာများစွာရှိတဲ့အတွက် ဖော်ပြရင် စာရှည်ကုန်မှာစိုးလို့ စာရေးသူကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
ပြည်ပဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာဒီးယား၊ဒူဘိုင်း၊နီပေါ၊ ဟောင်ကောင်၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား နိုင်ငံတို့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေအတွက်ပေါ့။စာရေးသူကတော့ ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မေပယ် ပန်းခြံကို သွားလည်ဖူးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိတော့ အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေက ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးမြော်ရတာလောက်တော့ ရင်ထဲအေးချမ်းစေနိုင်ပါ့မလား။
မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးတိုလေးထွက်ရအောင်။ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဘဝမှာ အမှတ်တရတစ်ခု ချန်ထားခဲ့တာပေါ့။
ခရီးထွက်ခြင်းက မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချပေးရုံသာမက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေလည်းနည်းပါးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ခရီးသွားခြင်းက များစွာအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေရသူတွေအတွက် ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် လမ်းအနည်းငယ်လျှောက်ရာကနေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးနော်။ နှစ်တိုင်းမှာ နေရာများစွာကို ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။တစ်လအတွင်းရှိတဲ့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ခရီးတိုထွက်ခြင်းဖြင့် မတူညီတဲ့နေရာအသစ်အဆန်း ၁၂ နေရာကို ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် အတွင်းဆို နေရာဘယ်နှခုများရောက်ဖူးသွားလိမ့်မလဲနော်။ ခရီးတိုဆိုတော့ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့။ ခရီးရှည်လို အထုပ်အပိုးများစွာ သယ်သွားစရာမလိုဘူး။ဒါကလည်း ကောင်းကျိုးတစ်ခုပါပဲနော်။ဖုန်းဆက်သွယ်မှုယာယီအဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။
တချို့အလုပ်တွေက ပိတ်ရက်မှာလည်းတာဝန်ယူရတာတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကြံဉာဏ်များချမှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်းတို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။
စရိတ်ထောင်းတာလည်း သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ခရီးတိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နေရာထိုင်ခင်းအတွက် အရမ်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။ ရက်တိုဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်ခသက်သာပါတယ်။ တချို့နေရာတွေဆို လမ်းခရီးစရိတ် သက်သာပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လည်း ထသွားထလာလုပ်နိုင်တာကြောင့် လေယာဉ်စရိတ်သက်သာတာပေါ့နော်။အစားအသောက်စရိတ် ရော နှစ်ရက်တာခရီးတွက် ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်မှာမို့လို့လဲနော်။ အဝစားပါစေအုံး။.
ခရီးရှည်ထွက်ခြင်းက အနည်းငယ် ခေါင်းကိုက်စရာရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း၊ မိသားစု တစ်နေရာရာမှာတော့ လစ်ဟာသွားနိုင်ပါတယ်။ ခရီးတိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေ ဝေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ခရီးထွက်ဖို့ကြိုပြင်ဆင်ရတာ နေရာရွေးရတာ ကအစ လွယ်ကူပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆို ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးမြော် ဖူးရမယ်လို့ရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့ စကားတွေကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ ပုပ္ပါးတောင်၊ ကျောက်တော်ကြီး၊ပုဂံ၊ကျိုက်ထီးရိုး၊ အင်းလေး၊ငွေဆောင် တို့လဲ ခရီးတိုထွက်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝအတိုင်းလှပတင့်တယ်တဲ့နေရာများစွာရှိတဲ့အတွက် ဖော်ပြရင် စာရှည်ကုန်မှာစိုးလို့ စာရေးသူကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
ပြည်ပဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာဒီးယား၊ဒူဘိုင်း၊နီပေါ၊ ဟောင်ကောင်၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား နိုင်ငံတို့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေအတွက်ပေါ့။စာရေးသူကတော့ ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မေပယ် ပန်းခြံကို သွားလည်ဖူးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိတော့ အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေက ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးမြော်ရတာလောက်တော့ ရင်ထဲအေးချမ်းစေနိုင်ပါ့မလား။
content education translation Uncategories